တခါတလေအရမ်းစိတ်ကုန်မိတယ် – Hlataw.com
အခု အချိန်ထိ ကားတွေ ဒီလောက်ပေါနေတာတောင် အသစ်မလဲပေးတဲ့မေမေ တို့ ကိုတခါတလေ အရမ်းစိတ်ကုန်တယ် ။ အဘိုးငယ်ငယ်ကတည်း က စီးခဲ့တဲ့ ရှေးဟောင်းမို့ တဲ့ လေ ။ နံပါတ် အသစ်တွေ ကားအသစ်တွေ စီးနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ကြားမှာ ဒီ… ဈ… နံပါတ်ကားကြီး တကားကား နဲ့ ရှက်လိုက်တာ အရမ်းပဲ ။ အဲ့ ကား ကြီး နဲ့ သွားရတာ ထက်စာရင် ခြေလျှင်သွားလိုက်ရတာ ကမှ တော်သေး ။ တကယ်ပဲ စိတ်ကုန်တယ် ။အခုလည်း ဖေဖေ ခရီးသွားနေပါတယ် ဆို မှ ဒီကားကြီးကို မောင်းပြီး လိုက်ပို့ ရအုံးမယ် ။ စိတ်ညစ်ညစ် နဲ့ ကား ဂိုထောင်ဆီ ထွက်လာခဲ့ တယ်။ ထင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ကားစက်က နှိုးလို့ ကိုမရပါ ။ဖေဖေ လည်း အမြဲ ပြင်နေရတာ သိနေတာပဲလေ ။ အခုလည်း သူ့ ဝသီအတိုင်းနှိူုးမရပြန်ဘူး။နှိူးမရတော့လည်း ပျော်တာပေါ့နော့် ။ လိုက်ပို့ စရာမလိုတော့ဘူး ပေါ့ ။ ဟီးးး လေ လေး တချွန်ချွန် နဲ့ မေမေ ရေ နှိုး မရဘူုးဗျို့ လို့ခပ်ဆာတာ လေး ရွဲ့ သံလေး ထည့်ပီး ပြောပေးလိုက်တယ်။
မုန်းလွန်းလို့တယူသန်တွေ…. မေမေပြန်ပြောလိုက်တာ က မျှော်လင့်ထားသလို မဟုတ်ပဲ စိတ်ပိုညစ်သွားတယ်… ဟဲ့ ဒါဆိုလည်း ၀ပ်ရှော့ ပြေးလေ တဲ့ နင့်အဖေ သွားနေကျဆိုင်သွား သူတို့ ပြောလိုက်သိတယ်တဲ့ ။ ဒီနေ့ မသွားရလည်း အဲ့ ကားက ပြင်ရမှာပဲလေ တဲ့ အခုသွားခေါ် တဲ့ငါတို့ တက်ဆီ နဲ့ သွားမယ် နင့်သာ ကားကို ပြင်ထားတဲ့သေပြီဆရာပဲ အွန်လိုင်းလေး သုံးပြီးသာယာမလို့ကို အာ့ကြောင့် ဒီကားကြီး ကို ကြည့်မရတာ တကယ် မုန်းလိုက်တာ…..ကားဝပ်ရှော့ရောက်တော့ ကားတွေ ကလည်း များလိုက်တာ ခေါ်နေကြမဟုတ်လို့ ဘယ်သူ့ ပြောရမလဲ ကြည့်နေတုန်း ချာတိတ်လေးတယောက်က အကိုဘာလုပ်ချင်လို့ မေးတော့ ကားပျက်လို့အိမ်မှာ လိုက်ကြည့်ရမှာ လို့ ပြောလိုက်တော့ မအားဘူး အကိုတဲ့ကားတွေ ကျနေလို့လိပ်စာပေးခဲ့လေ လူလွတ်ရင် လွှတ်ပေးမယ်တဲ့ အဲ့ လို ပြောနေတုန်းမှာ ဆိုင်ထဲက နေ လူကြီးတယောက် ထွက်လာတယ်။
ဆံပင်အရှည်က ကျောလည်လောက်ထိရှိတာကို ဗြောင်သိမ်းပြီး စီးထားတယ် ။ မျက်နှာက နှုတ်ခမ်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးရေးရေးတွေ နဲ့ ပါပဲ အရပ်မြင့်မြင့် ခပ်ထွားထွား နဲ့ မို့ ကြည့်လို့ ကောင်းပါတယ် အလုပ်ကြမ်းသမားမို့အသားတော်တော်မဲ ပေမယ့်စတိုင် ကျကျ ၀တ်ထားတော့ မိုက်နေတာပေါ့ ကွမ်းစားထားပြီး ရဲတောက်နေတဲ့ ပါးစပ်ထဲမှာ ဆေးလိပ်ကို သောက်ရင်း ကျနော့် ကို ကြည့်နေတယ်။ မင်းက ကိုစိုးဦး သားမဟုတ်လားတဲ့ သူက ကျနော့် ကိုသိနေပါလား ဖေဖေ ထက်ငယ်လှ လေးငါးနှစ်လောက်ပေါ့ အဲ့ ဒါကြောင့် ဟုတ်ကဲ့ ဦး လို့ပြောလိုက်တယ် ငါ့နာမည် ဇော်ထွေး ပါ မင်းအဖေ မရှိဘူးလား တဲ့အဖေ ခရီးသွားနေလို့ကျနော်လာခေါ်ရတဲ့ အကြောင်းပြောတော့ သူက ငါ ခန ခန လာပြင်ဖူးတယ် မသိဘူးလားတဲ့ ကျနော် မြင်ဖူးသလို ရှိပေမယ့် အဲ့ ကားကိစ္စတွေ မလုပ်ဖူးတော့ မသိတာ ပါလို့ ပြောလိုက်တယ် ခနစောင့် တဲ့ဦးလိုက်ခဲ့ မယ်တဲ့…. အိုခေ ပေါ့ ။
ကျနော်လည်း အဆင်ပြေသွားတယ် အလုပ်ပီးတာပေါ့ မဟုတ်ရင် မေမေ တွတ်ထိုးတာခံနေရမယ်လေ စောစောက ဂျင်းဘောင်းဘီ နဲ့ စမတ်ကျကျ ၀တ်ထားတဲ့လူကြီးက ခန နေတော့ အကျီ အဟောင်း နဲ့ပုဆိုး ကို လဲပီး ဆင်းလာတယ် လာချာတိတ် သွားမယ် ဆိုပြီး အိတ်တခု ကိုင်ပြီး ကျနော့်ဆိုက်ကယ်နောက်က ထိုင်ပြီး လိုက်လာတယ်…..ဆိုက်ကယ်ရပ်ပီး ခြံသော့ ဆင်းဖွင့်တော့ ဘယ်သူမှမရှိဘူးလားတဲ့အဖေက ခရီးသွားပြီး မေမေနဲ့မမ ကဈေးထဲ ဆိုင်ခန်းကိစ္စ နဲ့ သွား ကြလို့ကျနော် အိမ်စောင့် ဖြစ်နေတဲ့ အကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်။ ခြံတံခါး လည်းဖွင့်လိုက်တော့ သူက ကားဂိုထောင်ဖက်ကို ခြေလျှင်ဝင်သွားတယ် သူလာနေကျပဲလေ ကျနော်လည်း ဆိုက်ကယ်ကို ဆင်ဝင် အောက်မှာ ရပ်ပီး အိမ်ထဲ ရေ၀င်သောက်ရင်း အရမ်းပူတဲ့ ရာသီမို့ သူ့ အတွက် အအေး တခွက် ဖျော်လိုက်တယ်။ အအေး အပေးခင် အရမ်း အိုက်တာမို့အိမ်နေရင်း စွတ်ကျယ် လေး နဲ့ ဘောင်းဘီအပွ အတိုလေး လဲလိုက်တယ်။
အဲ့ တော့မှာ အေးအေးလူလူ နဲ့ နေသာ သွားတယ် ဒါနဲ့ ပဲ အအေးခွက်လေး ကိုင်ပီး ကားဂိုထောင်ဆီ ထွက်လာလိုက်တယ် ….. အအေးခွက်ကိုင်ထားတဲ့ လက်တောင် လွတ်ကျချင်သွားတယ် ကားဂိုထောင်ထဲမှာ ကားအောက်မှာ ပက်လက်ကြီး ၀င်ပြီး ပြင်နေတဲ့ဦးဇော်ထွေး ရဲ့ ပုဆိုးကြီးက အောက်စလွတ်နေပီး အမွှေးထူထူတွေ ကြားထဲက လီမဲမဲရဲရဲ ကြီး ကို မြင်နေရတယ် လီးကြီးကပျော့နေတာတောင် တော်တော်ကြီးတယ် ပေါင်မွှေးတွေ ခြေသလုံးမွှေးတွေ လမွှေးတွေ နဲ့ တကယ့်ကို အမွှေးပေါတဲ့ လူကြီးပါလား ။ ကျနော်လည်း ခုန်နေတဲ့ ရင် … တုန်နေတဲ့ လက်တွေ ကို ထိန်းရင်း လီးကြီး ကို အနီးကပ်ပိုကြည့်ရဖို့မသိချင်ယောင်ဆောင်ပီး သူ့ ခြေထောက်နား ကပ်ထိုင်လိုက်တယ် ။ ဦးဇော် အဆင်ပြေလား အမောပြေ အအေးသောက်ပါဦး လို့ ပြောလိုက်တယ် သူက ကျနော့်ကို လှမ်းကြည့်ပြီး လုပ်ကြည့်နေတယ် အအေး က ပြီးမှ သောက်တော့မယ် တဲ့သူ့ လက်မှာ ဂွတွေ နဲ့ဘာတွေလုပ်နေမှန်းမသိပါဘူး ။
ဒါနဲ့ လီးကြီး ကိုထပ်ကြည့်မယ် ဆိုကြည့်လိုက်တော့ အံ့သြသွားတယ် လီးကြီးက တောင်နေတယ် တဆက်ဆက်နဲ့ တုန်ပြနေတယ် ပုတ်သင်ညို မှာ ခေါင်းငြိမ့် သလို ပဲ ဒစ်ကြီးက အရေဖျားဖုံးနေတယ် သူ့ လီးက အရေပြားတော်တော်ရှည်ပုံရတယ် တောင်နေတာတောင် လီးက ဒစ်မပြုတ်ပဲ ထိပ်မှာ ရဲရဲစုစုလေး ပဲ ပေါ်နေတယ် အရမ်းလည်းမတောင်သေးလို့ ဖြစ်မှာပေါ့နော် ကျနော်လည်း ကြည့်ကောင်းကောင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာ ဝေဖန်ရင်းကြည့်နေလိုက်တယ်။ ကျနော် ကြည့်နေရင်း တွေးမိတာ ဒီလူကြီး ဘာကိစ္စလီးတောင်ရတာလဲပေါ့ ။ အလုပ်လုပ်နေရင်း နဲ့ကို တောင်နေတာ ဆိုတော့ စဉ်းစားစရာပဲ ။ အဲ့ အချိန်မှာပဲ သူ့ လက်တွေ က ပုဆိုးပေါ်ကနေ လီးကို စုတ်ကိုင်လိုက်ပီး ဖုံးနေတဲ့ဒစ်ကို ဆွဲဖြုတ်ရင်း ဂွင်းထုသလို လေးငါးချက်လောက် လုပ်လိုက်တယ်။ အိုး…. ရဲတွက်နေတဲ့ ဒစ်ကားကြီးက ခရမ်းချဉ်သီးကြီးလို ပေါ်လာတယ်။ ကြည့်နေရင်း နဲ့ အာခေါင်တွေ ချောက်လာတယ်။ တကယ်ကို အားရပါးရ စုတ်ချင်စရာကြီးလေ ။
ရင်တွေ အရမ်း ခုန်လာတယ်ဗျာ နေရခက်လောက်အောင်ပဲ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ တွေးမရ ဖြစ်နေတယ် ။ အဲ့ အချိန်မှာ သူ က ချာတိတ် ဆိုလှမ်းခေါ်ပြီး သူ့ အိပ်ထဲက ဆယ့်လေးဂွ လေး ယူပေးပါလားတဲ့။ အဲ့ ဒါနဲ့ ကျနော်လည်း ရှာပီး သူ့ ကို လှမ်းပေးရင်း ကားအောက်ထိ နည်းနည်း ကိုယ်ကို ၀င်လိုက်တယ် လက်ထောက်သလို နဲ့ သူ့ ပေါင်ကို ကိုင်ထားလိုက်တယ် ဂွပေးပြီး တာ ကို ပြန်မဖယ်တော့ပဲ ပေါင်ကို ပွတ်ပေးလိုက်တယ် လုပ်နေရင်း နဲ့ မှာ ဖိးလ်က ပိုတက်လာတယ် ကျနော် ပေါင်ပွတ်ပေးနေတာ ကို ဘာမှ မပြောတော့ ကျနော်လည်း ပုဆိုးပေါ်က နေ လီးကို ဆုတ်ကိုင်လိုက်တယ်။ သူ က သူ့ အလုပ်သူဆက်လုပ်နေတယ် အဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်သိလိုက်တာ က သူ တမင်ကျနော့်ကို အောက်စလွှတ်ပြီး မြူဆွယ်လိုက်တာပဲ ဆိုတာ ကို ပါ ။ ကျနော့် စိတ်တွေရဲ သွားတယ် လုပ်ချင်တာကို မထိန်းတော့ဘူးလေ။ ပုဆိုးကို အသာဖယ်ပီး ရဲနေတဲ့ ဒစ်ကြီးကို ငုံပေးလိုက်တယ် အမွှေးထူထူတွေ နဲ့ မို့ အောက်သိုးသိုး လီးနဲ့ နဲ့ အတူ။
ငံကျိကျိ အရသာ လေး ကို ခံစားလိုက်ရတယ် အဲ့ ဒါတွေက ဖီးလ် ပိုတက်စေသလားမသိပါဘူးလေ အရင်းကိုလက်နဲ့ ဆုတ်ကိုင်ရင်း အားရပါးရ စုတ်ပေးနေလိုက်တယ်။ အမှန်တိ်ုင်းပြောရရင် လီးမစုတ် ဖင်မခံရတာ ကြာနေပီလေ အခုလို လီးကြီး နဲ့ ဆုံရမယ်လို့ မထင်ထားခဲ့ မိဘူး။ အရင်းကဆုတ်ကိုင်ထားတာတောင် အပေါ်က စုတ်ရတာ အာခေါင်ထောက်တယ်။ အစွမ်းကုန်တောင်မတ်လာတော့ သေချာတယ် ၇လက်မတော့ရှိတယ်။ အတုတ်ကလည်းစံချိန်မှီလိုက်တာ ပြောစရာမလိုဘူး။ အရေဖျားရှည်ရှည်ကြီးကို ပါလာအောင်ပါးကို ခွက်နေအောင်စုတ်ပေးရင်းသူ့ ကိုကြည့်လိုက်တော့ အလုပ်လုပ်နေတာ ကိုရပ်ပီး ကျနော်စုတ်နေတာ ကိုကြည့်နေတယ်။ ပြီးတော့ စုတ်လို့ ကောင်းတယ်မလားတဲ့ ။ ဘောတွေရော စုတ် ပြီးရင် လျှာနဲ့ ယှက်လေ တဲ့မျက်လုံးကို စိုက်ကြည့်ပြီး ခိုင်းတယ် အဲ့ အချိန်မှာ သူ က မှော်ဆရာလို ပါပဲ သူခိုင်းသလို လဥတွေ ကို အားရပါးရ စုတ်လိုက်ယှက်လိုက် ဒစ်တွေ ကိုစုတ်လိုက်လုပ်ပေးနေမိတယ်။
အဲ့အချိန်မှာ သူက ကဲချာတိတ် စုတ်တာရပ်တော့ကွာ တဲ့မင်းဖင်ကြီး ကို လိုးချင်နေပီ တဲ့ ။ သူ ပြောတဲ့ ပုံစံက တမျိုးပဲ ရင်တွေ တအားခုန်သွားတယ်။ ကျနော်လည်း စုတ်တာကိုရပ်ပီး ကားအောက်ကထွက်လိုက်တယ် ပြီးတော့ ဂိုထောင်ထဲ့ နည်းနည်းဝင်လိုက်ပီး ကားအနောက်မှာ ရပ်နေလိုက်တယ် ပြီးတော့ သူက လိုက်လာပြီး သူ့ ပုဆိုးကို ချွတ် အကျီ ကိုလည်း ချွတ်ပြီး လီးကို ဆွရင်း အနားကပ်လာတယ်။ ကျနော့်ကို ခါးကနေသိုင်းဖက်လိုက်ပီး လည်ပင်းတွေ ကို တအားနမ်းတယ် သူ့ အမွှေးတွေ နဲ့ ပွတ်ဆွဲတော့ အားးး လူုကို ကော့တက်သွားတာပဲ ဖင်ကို အားရပါးရ စုတ်ကိုင်ရင်း ဒီဖင်ကြီးကို လိုးချင်နေတာကြာပီတဲ့ဒီအိမ်လာတိုင်း မင်းဖင်ကြီး ကို ကြည့်နေတာ ကြာပီ တဲ့ သူ့ အပြောတွေက အရမ်းဖီးလ်တက်စေတာပဲ ကျနော်ဝတ်ထားတဲ့ စွတ်ကျယ်ကို ဗြန်းခနဲ့ ဖြဲချပီး နို့ တွေ ကို ကုန်းစို့ တယ် စို ရင်း နဲ့လျှာနဲ့ အပြားလိုက်ပွတ်ယှက်ပေးတော့တယ် အားး အရမ်းဖိးလ်တက်နေပီလေ။
ဖီးလ်တက်နေမှန်းသိတော့ နို့ ကို ဆက်ခနဲ့ ကိုက်ချပလိုက်တယ်။ အားးးး တော်တော်နာသွားပေမယ့် အရမ်းကောင်းတယ်ဗျာ ။ အဲ့ အချိန်မှာပဲ သူကလာခဲ့ မင်းဖင်ကိုလိုးတော့မယ် လီးကို တံတွေးရွဲအောင် စုတ်လိုက်တဲ့ကျနော်က ဦးဇော် ဆီသွားယူလိုက်မယ်လို့ ပြောတော့ မလိုပါဘူုး မင်းခံနိုင်ပါတယ် တဲ့ ဒီတိုင်းလိုးမယ် တဲ့မင်းဖင်ကိုလိုးဖူးတဲ့ ကျော်စွာ ဆိုတာ ငါ့တူတော်တယ် တဲ့ ကျနော် အံ့သြသွားတယ်။ အံ့သြမနေနဲ့ကျော်စွာ ပြောကတည်းက မင်းဖင်ခံတာ သိပီးသားတဲ့ မင်းအဖေ နဲ့ ခင်နေလို့ အားနာလို့ဘယ်လိုလိုးရမှန်းမသိလို့ မလိုးတာတဲ့ ဒါကြောင့်သူ အပြောတွေ တမျိူးဖြစ်နေတာကိုး ကျော်စွာ ဆိုတာ ကျောင်းတုန်းက ကျနော့်ကို ခနခန လိုးဖူးတဲ့ အကိုကြီး တယောက်ပေါ့ အံ့သြနေတဲ့ကျနော့် ဆံပင်ကို ခပ်ဖွဖွ ဆုတ်ကိုင်ရင်း အာခေါင်ထိ ထိုးထိုးသွင်းတော့ လီးတံတချောင်းလုံး တံတွေးတွေရွဲနစ်သွားတယ် ကျနော့် ဘောင်းဘီ အတိုလေး ကို အမြန်ချွတ်ပီး သူ့ ရှေ့ မှာရပ်နေတော့။
ကားနောက်ဖုံးပေါ်မှာ ဖင်ကုန်းပီး ခါးကို ကော့ထားခိုင်းတယ် ပြီးတော့ ဖင်နှစ်ခု ကိုဖျစ်ညှစ်ပီး ဖြဲ ပီး သူ့ လျှာကြမ်းကြီးနဲ့ ကုန်းယှက်တော့တယ် အလိုးခံ အကြိမ်ကြိမ်လုပ်ဖူးပေမယ့် ဖင်ပေါက်ကို အယှက်မခံဖူးတဲ ကျွန်တော် အံ့သြပီး အရသာထုးကို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ဦးဇော်ကို အားနာစိတ်နဲ့ ချစ်သွားတယ်။ ဖင်ပေါက်ကို လက်နဲ့ နှိုက်လိုက် လျှာ ကို ချွန်းပီး ထိုးလိုက် ယှက်လိုက်နဲ့ အမျိုးစုံလုပ်နေတယ် တင်ပါးတွေ ကို လည်း နို့ စို့ သလို စို့ ရင်း သွားနဲ့ ဖိဖိပြီး မနာအောင်ကိုက်တယ် ။ လက်ခလယ်နဲ့ ဖင်ပေါက်ကိုနှိုက်ချဲ့ရင်း ကနေ လက်ညိုးပါ ထည့်ပီး နှစ်ချောင်းပူး ထည့်လိုက်တော့ ကျနော် ကော့သွားတယ်အဲ့ ဒါကို သူကအဆုံးထိနှိုက်ချဲ့ ပီး အရသာခံနေတယ် အရသာ ရှိလွန်းနေတော့ ကျနော်လည်း သူလုပ်သမျှ ကို ခံနေလိုက်တော့တာပါပဲ ဖင်ကြား ထဲကို သူ့ တံတွေးတွေ ဗျစ်ခနဲ့ ထွေးလိုက်ရင်း ဖင်နှစ်လုံးကို စိပီး လီးကို အမြှောင်းလိုက်ပွတ်ဆွဲနေတယ်။
ပေါင်နှစ်လုံးကို စိထားပြီး ပေါင်ကြားထဲ ဗြစ်ဗြစ်နဲ့ ထိုးထည့်တော့ ကျနော့်ဘောတွေ ကိုလာထိုးပေးနေတဲ့ အရသာက လည်းထူးတယ်ဗျာ အဲ့ လို နဲ့ ဖီးလ်တက်နေတော့ တအားကော့ပေးထားတဲ့ ကျနော့်ဖင်ကို ဖြန်းခနဲ့ ရိုက်ပီး ချဲ့ ထားတဲ့ ဖင်ပေါက်ထဲ ကို လီးကိုတချက်ထဲနဲ့အဆုံးထည့်ချပလိုက်တော့တယ်.။ ဒီတခါတော့ မနေနိုင်ပဲ တအားကိုအော်ချပလိုက်တော့တယ် အရမ်းကို ကြိမ်းပီး နာသွားတာကိုးသူ က ဖီးလ်တက်ပီးမရပ်မနားဆောင့် ကျနော်က ရလက်မလောက်ကြီး တချက်ထည်းသွင်းခံရလို့ အော် နဲ့စည်းချက်ကတော့ကိုက်နေတာပဲ လက်နှစ်ဖက်ကို လက်ပြန် ကိုင်ပီး ဖင်ပေါက်ကို လီးအလွတ်မခံပဲ တချောင်းလုံး တဗြစ်ဗြစ်နဲ့ လိုးနေတော့တာပါပဲ ။နာကျင်တာထက် သူ့ လုပ်ဟန်တွေက ဖင်ခံရတဲ့ သူ အရသာတွေ့ စေတာ တော့ အမှန်ပါပဲ နာနေတဲ့ ကြားက ကော့ပေးနေမိတာ ကျနော် အသိဆုံးပါ။ ဒါကိုသိတဲ့ ဦးဇော်က လက်ပြန်ချုပ်ထားတဲ့ လက်တွေ ကိုလွှတ်လိုက်ပီး ချာတိတ် ကားကို ထောက်ထား ။
ငါ တအားဆောင့်ချင်ပီ တဲ့ကျနော့် ခါးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ်ကိုင်ပီး……. အားနဲ့ မော်တာ အရှိန်မြင့်လိုက်သလို…….. တရပ်ဆက်ဆောင့်တော့တာပါပဲ ဒီတခါ ကျနော် အော်တာတော့ကောင်းလွန်းလို့ ပါ တအားအား နဲ့ကျနော် အော်သံတွေနဲ့ အတူ ကျနော် လရေတွေ ကားပေါ် ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်…….လရေထွက်တော့ ဖင်က ကျုံ့ ပီး ညှစ်လိုက်တော့….. သူ့ က….. အား….. အရမ်းကောင်းတဲ့ ဖင်ကြီးကွာ ဆိုပီး…… ငါထိန်းမရတော့ဘူး လာသောက်တော့ ငါ့လရေတွေ ဆိုပီး …..ဆံပင်ကို ဆွဲပီး ပါးစပ်ပေါ်တင်ပီး သူ့ လက်နဲ့ ထုပစ်လိုက်တယ် အရေပြစ်ပြစ်တွေက နှုတ်ခမ်းတလျှောက်စီးကျနေပီး…… မျက်နှာပေါ်မှာရွဲကုန်တယ်……လရေတွေ ထွက်နေတဲ့ဦးဇော်ကို ကြည့်ရတာ ဆံပင်ရှည်ရှည် နဲ့ အရမ်းမိုက်တဲ့မင်းသား…..ဖူးမင်းသား တယောက်လိုပါပဲ…… အရမ်းချစ်မိသွားတယ်ဗျာ….. ဒါနဲ့ ပဲ သူ့ လရေတွေ နဲ့ လီးကြီးကို….. အားရပါးရငုံရင်း စုတ်ပေးနေလိုက် တော့လေသည် ….ပြီးပါပြီ။